MacBookga xiga ee soo socda, oo midabbo kala duwan leh sida iMac cusub | Waxaan ka socdaa mac
Haddii aad jeceshahay midabada iMac-ka cusub, maxaad ugu kordhin weyday moodooyinka kale? Taasi waa waxa John Prosser u maleynayay inuu u maleeyay, yaa ku dhiirraday inuu sheego in MacBook-ka soo socda ee Apple ay suuqa ka bilaabayso, waxay ku imaan doonaan midabbo kala duwan. Sidan ayaan ku yeelan doonnaa xulasho aan ku noqon karno mid moodada ah. Laga soo bilaabo Apple Watch illaa iMac, iyada oo loo marayo iPhone. Dhamaan isku midab.
Jon Prosser, oo ah falanqeeyaha Apple ee inta badan saadaasha ku saleeya ilo aan la aqoon, ayaa bamkii ku tuuray kanaalkiisa YouTube-ka ee Apple u diyaarisay mustaqbalka dhow noocyo cusub oo MacBook Air oo leh jab cusub oo M2 ah iyo midabbo kala duwan. Waxaas oo dhami waxay ku saleysan yihiin xaqiiqda ah in isha ay kuu sheegtay inay horey u arkeen dhowr buluug ah oo loo yaqaan 'MacBook Airs' taasna waxay u horseedaa inay u maleyso inay jiri doonaan midabbo badan. Muuqaalka iyo muuqaalka cusub ee 24-inji ah ee iMac ee la soo bandhigay 20-kii Abriil.
Xanta ku saabsan cusbooneysiinta MacBook Air, waa yar tahay illaa iyo hadda, laakiin kuwa jira ayaa ku saleysan xaqiiqda ah in soo-bandhiggu uusan dhici doonin ilaa qeybtii labaad ee sanadkan 2021-ka. Markaa uguyaraan waxay ka xaqiijinayaan Bloomberg (Mark Gurman) ama xitaa Ming-Chi Kuo oo xaqiijinaya in xitaa moodooyinkan cusub ay la imaan doonaan shaashad miniLED ah.
Sida had iyo jeer markaan ka hadlayno wararka xanta ah oo aan u saxnayn sida kan oo kale, oo aan naloo soo bandhigin xog dheeri ah ama xitaa taariikho, waa inaan sugnaa maalmaha ha dhaafee oo aan aragno sida xantaas loo xoojiyay ama loo qasi jiray. Suurtagal maaha. Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa in fikradda ah in la bilaabo midabka iMac uu ahaa mid aad u fog oo aan halkaas ku haysanno. Haddii kuwan si wanaagsan loo aqbalo (sida ay u muuqato inay yihiin), waxaan haysan doonnaa laptop-yo midabbo leh, oo aan ka labalabeyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » The soo socda MacBook Air, in midabyo kala duwan sida iMac cusub
Isticmaaluhu wuxuu sameeyaa nooca "kaarka" AirTag si uu ugu haysto boorsada jeebka